निकै उर्जावान र इमान्दार हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन ? – Online Nepal
December 5, 2020 103
काठमाडौँ । ज्योतिषीअनुसार, राशि जति पनि छन् तर कुन राशीले कुन ब्यक्तिलाइ फाइदा हुन्छ त ? र कुन चिजमा फाइदा हुन्छ त ? हो यो बिषय निकै फरक रहेको छ। कुनै न कुनै राशिले कुनै ठाँउमा राम्रो गर्छ भने कुनै ठाँउमा नराम्रो पनि गर्छ।
अर्थात सबै राशीले सबै गुणमा राम्रो नराम्रो गर्छ भन्ने हुदैन्। सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। तर, त्यसमध्ये पनि ४ वटा राशि यस्ता छन्, जो वास्तवमै धेरै बलिया हुन्छन्। यी राशिहरु यती बलवान हुन्छन् की, त्यहाँ अरुले दबिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
१) मेष राशिः श्रेणीमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा र सबै राशिभन्दा उर्जावानमा मेष राशि मानिन्छ। यस राशिका मानिसहरु सधैं सक्रिय रहन्छ, रोक्नु यीनिहरुको स्वभामा हुँदैन्। कसैले यो राशिका मानिसहरुलाई दिक्क बनाउँछ भने उनीहरुले त्यसको वास्ता गर्न छाडिदिन्छन्।
यस राशिका मानिस कसैमाथि भरोसा गर्दैनन्। कुनै कुरालाई सधैं आफू मातहत राख्न सक्षम हुन्छन्। कुनै पनि कार्यमा आफ्नो निर्णय लागू गर्न चाहान्छन् र धेरैजसो अवस्थामा सफल पनि हुन्छन्। यी कसैसँग प्रभावित भएर आफ्नो जीवनको दिशा बदल्दैनन्।,,,भिडियो हेर्न तला क्लिक गर्नुहोला,,,
२) बृश्चिक राशिः बृश्चिक राशिका मानिसहरु समर्पित र इमान्दार हुन्छन्। साथै यस राशिका व्यक्तिहरुको भित्र विद्रो ही भावना पनि प्रमुखताका साथ हुन्छ।
यो राशिका मानिसहरु धेरै भावुक पनि हुन्छन् । जसकारण कहिलेकाँही यीनिहरुलाई सहन मुस्किल पनि हुन्छ । बृश्चिक राशिका मानिसहरुमा भविश्यका संभावित घटनाबारे थाहा पाउने अद्भुत क्षमता हुन्छ।
३) कुम्भ राशिः कुम्भ राशि भएका मानिसहरुको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको के हो भने उनी भावनामा बगेर कुनै निर्णय गर्दैनन्।
यदी जरुर पर्यो भने यी आफ्नो भावन र समवेदनाहरुको पनि वास्ता नगरी अगाडि बढ्न सक्छन्। कुम्भ राशिका मानिसहरु धेरै रोचक र जिज्ञासु हुन्छन्। यी बुद्धिमान पनि मानिन्छन्। यी जिद्धी स्वभावका हुनुका साथै आत्मविश्वासी पनि हुन्छन्।
४) मकर राशिः यो राशि सबैभन्दा उत्कृष्ट राशि मानिन्छ, किनभने यो राशिका मानिसहरुमा आत्म नियन्त्रणको भावना धेरै प्रबल हुन्छ।अन्य राशि भएका व्यक्तिको मकर राशिवालाहरुमा उत्कृष्ट तरिकाले सोच्ने र सम्झने क्षमता हुन्छ। यो राशिका मानिसहरु सधैं सक्रिय रहन्छन्।मकर राशिका मानिसहरुमा आत्मविश्वास धेरै नै हुन्छ। जसकारण यो राशिका मानिसहरु धेरै छिटो सफलता हासिल गर्न सक्छन्।,,,भिडियो हेर्न तला क्लिक गर्नुहोला,,,
Prevमहाअल्छी हुन्छन् यी पाँच राशिका व्यक्ति
Nextडन्डीफोरले अनुहार बिग्रियो ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
भारतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या एक हजार नाघ्यो, एकैदिन ६९ को मृ*त्यु
कोरोना संक्रमित नेपालीले बेलायतबाट दिए सम्पूर्ण नेपालीलाई यस्तो संदेश ! (भिडियो)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (51083)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45384)
इजरायल रोजगारमा ५ सय नेपाली पठाइदै, कहाँ दिने आवेदन, के-के चाहिन्छ योग्यता
यस्तो समस्या भएका मानिसले खाँदै नखानुहोस् लसुन, नत्र कलेजोमा पुर्याउँछ नराम्रो असर !